IINGCAMANGO ZOKUGCINA IZIHLANGU ZECAROSET (IIRACKS KUNYE NEESHELVING DESIGNS) - UYILO LWEGUMBI LOKULALA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokulala Iingcamango zokuGcina izihlangu zeCaroset (iiRacks kunye neeShelving Designs)
Wamkelekile kwigalari yethu yemibono yogcino yezihlangu kubandakanya uyilo lobunewunewu kunye nendlela yokuququzelela ii-racks kunye neeshelfu.
Abantu abathanda imfashini kunye nokunxiba bahlala bebaleka kwingxaki efanayo: indawo yokugcina. Asinguye wonke umntu onendawo entle emakhayeni abo okanye ezindlwini zabo, kwaye amaxesha ngamaxesha, kufuneka sincame ukwenza yonke into ilingane nakweyiphi na indawo ekhoyo.
Kulungile ukwazi nangona kunjalo, ukuba zininzi izisombululo zokugcina kunye netekhnoloji ekhoyo kwintengiso, kwaye ngokuxhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali kunye nendawo yakho kunye neemfuno zokugcina, unokufumana eyona isebenza ngcono kuwe!
Ngokungafaniyo nempahla, izihlangu zinzima ngakumbi ukugcina. Ezinye izinto zezihlangu kufuneka zigcinwe kuluhlu lobushushu oluthile ukuze zigcinwe zikowona mgangatho usemgangathweni. Izinto ezinjengeebhutsi zifuna indawo ethe kratya kwaye kunzima ukuyigcina. Kwaye ezinye azinandawo yaneleyo yezihlangu abanazo. Kuxhomekeke kubungakanani bekhabethe yakho, ukhetho kunye neemfuno, kukho izisombululo ezimbalwa zokugcina izihlangu onokuzisebenzisa.
Uzihlela njani izihlangu kwiCloset
Iishelufa zezihlangu zeCloset
Ukutyibilika Iishelufu zezihlangu
Emva kweRacking Shoe Rack
Ukuzimisa kunye nasemva kweeRack Shoe Racks
I-Rack Shoe efanelekileyo kwiCloset
Inqanaba lesi-3 leRack Shoe
Iingcamango zokuGcina izihlangu kwiiNdawo eziValiweyo ezincinci
Nazi ezinye zeendlela zokugcina izihlangu ezithandwayo:
Iishelufa -Iishelufa yesihlangu esiqhelekileyo ihlala yenziwe ngomthi okanye kwiibhodi zamasuntswana. Ngokufanelekileyo, banokufakwa kubakaki bokulungelelanisa ukuphakama ukuze ukwazi ukuhlengahlengisa ukuphakama kweshelufu (oku kuluncedo ngakumbi kwiibhutsi, izithende kunye nezihlangu ezisikwe kakhulu).
Ukuvulwa kwishelufa kuhlala kukhethwa kuba kukuvumela ukuba ujonge ngokulula kwingqokelela yezihlangu. Abanye abantu bongeza ukuxhaswa kwesipili ukwenza ikhabethe libukeke lisesithuba, kunye nezibane zeshelfu zokukunceda ubone izihlangu.
Ingcebiso: Thoba amashalofu ezantsi kancinci (malunga ne-3 ukuya kwi-5 degrees) ukuze ube nokujonga ngokulula kwizihlangu zakho ezishelfini ngaphambili.
IiRacks -Izixhobo zokubeka izihlangu ezizimeleyo azibizi kwaye zilungele abo banezikhala ezincinci. Iindidi ezidumileyo zibandakanya emva komnyango, amanqanaba amathathu kunye neerack ezijikelezayo. Sabelana ngemifanekiso yezi ngolwazi olungezantsi.
Igunjana eliboniswe apha ngasentla linendawo elungileyo ye-closet, kunye nesihlangu esincinci, ngoko ke akunzima kangako ukubonisa yonke into kuhlobo lweshelfu yezihlangu evulekileyo.
Ukwenza ikhabethe ibonakale inkulu kwaye incede ngokunxiba, kufakwa isipili esixhasayo kunye nokukhanyisa kwishelufu. Olunye ukongezwa okupholileyo sisiqithi semarble sekhabethe enebhentshi eqhotyoshelweyo eyenza ukubeka izihlangu ukutshatisa isinxibo kube lula.
Ungasebenzisa enye yezinto ezininzi isoftware yoyilo iinkqubo zokuzama iindlela ezahlukeneyo zokunxiba, ishelfu kunye nekhabhathi kwindawo yakho yokulala ukuze wenze indawo esebenzayo nenomtsalane.
Mhlawumbi uphelelwa yindawo yokugcina, okanye ufumanisa ukuba indawo yokugcina izihlangu ayisasebenzi kakuhle kwakhona. Okanye ukuba ubukele uMarie Kondo kwiNetflix, isenokuba iqhubile nomnqweno wakho wokuhlengahlengisa ikhabethe lakho. Nokuba ziphi na izizathu zakho, kukuququzelela ikhabethe ngokubanzi, kunezibonelelo ezininzi ngaphandle kokuqalwa komsebenzi okufunekayo.
Vavanya izihlangu zakho - Thatha zonke izihlangu zakho kwindawo yakho yokugcina kwaye uzivavanye zonke. Oku kuvakala kakhulu nguMarie Kondo, kodwa emva kokubakhupha bonke kugcino, unokufumana ezinye izihlangu ongakhange uzisebenzise kuba ungaziboni phakathi komonakalo, okanye ufumane izihlangu ezingasakulungeli okanye yonakele kakhulu kwaye sele kufanele ilahlwe. Ngokusisiseko, zama ukunciphisa oko kufuneka ukugcine, ukuba unako.
Yahlula izihlangu zakho ngohlobo - hlanganisa iiteki zakho, izithende, iibhutsi, iimbadada, njl.njl. Ukuba ufuna ngakumbi ngakumbi, unokuyihlela ngombala okanye ukuba uzisebenzisa kangaphi.
Khetha uhlobo lokugcina izihlangu -Jonga ukuba loluphi uhlobo lwesisombululo sokugcina esinokusebenza ngcono kwisithuba esikhoyo, isixa kunye nohlobo lwezihlangu onazo. Abaququzeleli becingo kunye nentsimbi bahlala bengasebenzi kwizithende, kodwa banokwanela amateki kunye nezihlangu ezisicaba. Ngokubanzi, ukhuni okanye nasiphi na ishelufu yomphezulu osicaba sisebenza kwiintlobo ezininzi zezihlangu. Kananjalo jonga ukufumana ukuphakama okulungelelanisiweyo kweshelufu njengoko kuya kwenza kube lula ukuhlela
ukucima njani irejista kwiqhina
Gcina ngokwenqanaba - Sonke sineemfuno ezahlukeneyo, ke qiniseka ukuba uzigcina izihlangu zakho ngendlela othanda ngayo. Cinga ngokubeka iiperi zakho ozithandayo ngokulula ukufikelela kuzo ezishelifini, kwaye ubeke iimeko zakho ezizodwa kuphela kunye nezihlangu zonyaka kwiishelufa eziphezulu. Kuya kunceda ukuba iishelfu zakho zithambekele ezantsi ukuze ubone ngokulula zonke izihlangu zakho
Iyafana nomnye umzekelo, oku hamba kuyilo lwekhabethe ifaka ishelufu yezihlangu evulekileyo. Lo mzekelo, nangona kunjalo, ubeka ukugcinwa kweebhutsi emazantsi, kwaye uthambise ishelufa yazo ezantsi ukonyusa indawo ekhoyo kwaye ukwazi ukubona ngokucacileyo izihlangu ngaphambili.
Xa kuthelekiswa nemizekelo emibini edlulileyo oku kugcina izihlangu kusebenzisa iibrakethi zentsimbi ezinokutshintshwa ukuze zibambe iishelfu endaweni yazo. Ezi zibiyeli ziqhotyoshelwe kwinkxaso yentsimbi ethe tyaba eya kukuvumela ukuba uhambise ubude beeshelfu zakho njengoko kufuneka.
Ukuba awuyithandi indlela iishelufu zomthi ezibukeka ngayo, emva koko unokusebenzisa iishelufa zeglasi ukugcina izihlangu. Oku kuyakwenza ikhabethe yakho yezihlangu ijonge kancinci kwaye iya kukuvumela ukuba usebenzise izibane ezincinci ukukhanyisa iishelufa.
Ukuguqula olu donga lube yishelufu yokubonisa yezihlangu eyakhelweyo yindlela elungileyo yokwandisa isithuba sodonga emva kwezinyuko. Ileli ehambayo ikwaqhotyoshelwe ukuba ufikelele ngokulula kwizihlangu ezigcinwe kwiishelufa eziphezulu.
Olu lwakhiwo lwandisa indawo ejikeleze umnyango wezihlangu. Ukuba unesakhiwo esifanayo ekhaya, olu luvo olulungileyo ukuba luyahambelana neemfuno zakho.
Unokudibanisa neeshelfu zakho zezihlangu kunye nekhabhathi yakho yempahla. Lo mzekelo ubonakalisa uhlobo oluvaliweyo lweevenkile kunye neeshelfu zezihlangu eziphakamileyo ezihlanganisiweyo.
Ukuba awunazihlangu zininzi njengeminye imizekelo, esi sisombululo sokugcina sinokusebenzela iimfuno zakho. Le yidrowa evulekileyo / yohlobo lokutsala ishelfu yezihlangu, apho izihlangu zigcinwa kuphela kumazantsi ekhabhathi.
Ezi zihlangu zekhabethe ngumxube wezihlangu ezivulekileyo kunye nokugcinwa kwekhabhinethi evaliweyo ngokuqinisekileyo ekwandisa inani lezihlangu ezigciniweyo. Nangona kunjalo, oku kuhlala kwenziwa kuphela ukuba unendawo yokugcina eninzi ekhoyo.
Le yenye yeeflethi zezihlangu ezivulekileyo ezakhelwe-ngaphakathi ezinamashalofu aphakamileyo anokuhlengahlengiswa.
Ukuba awufuni ukusebenzisa isitulo okanye ukufikelela ngaphezulu ukufumana izihlangu zakho kwiishelufa eziphezulu, cinga ukufaka iishelufa zezihlangu ezifanayo kulo mzekelo-zibekwe kuphela kwinqanaba eliphakathi lekhabhathi ukufikelela ngokulula.
Le khabhathi ibekelwe izihlangu ezineebakethi ezifakwe ngepini ukuze zilungelelanise ngokulula iishelufa.
Enye ikhabhathi esetyenzisiweyo edibeneyo edibanisa izihlangu kunye neempahla zokugcina. Le khabhathi i-laminated ikwasebenzisa iishelufa eziphakanyisiweyo zokuphakama.
Le gunjana lophahla alinandawo ininzi yophahla / udonga, ke endaweni yekhabhathi ende yezihlangu, lisebenzisa lonke ubude beendonga zerali yezihlangu zentsimbi.
Esi sesinye isisombululo sokugcina kwiindawo ezinendawo encinci, nangona ikwathabatha indawo, kodwa iyanceda ukuphinda kabini amandla akho eshelfu ngaphandle kokuthatha igumbi elininzi. Oku kusebenza ngokubeka ishelfu yezihlangu ezi-2 nangaphezulu kunye nokuncamathisela iishelfu zangaphambili kwizixhobo ezityibilikayo.
Isilayidi esishelifini yokubeka ishelfu yesisombululo sisisombululo esihle ngokwenene ukuba unezihlangu ezininzi ekufuneka uzigcinile kodwa akukho sithuba saneleyo. Oku kukuvumela ukuba ubambe kabini indawo yokugcina izihlangu.
Kwizithuba ezincinci, ukongeza iishelfu zomthi kunokuba kukutya kakhulu, ke enye indlela elungileyo inokusebenzisa iishelfu zentsimbi ezinokuphakama onokuzithenga ngokulula kwaye uzifake kuyo nayiphi na indawo encinci / indawo ekhoyo.
Emva komnyango wezihlangu emnyango- Jonga ku IAmazon
Ukuba awusenasithuba kwigumbi lakho okanye ekhabhathini, unokongeza nje indawo yokugcina izihlangu ezimeleyo onokuhambahamba kuyo xa kufuneka, okanye ufumane enye yezo ziqwenga zezihlangu ezinokudityaniswa ngasemva komnyango wakho. Inkqubo ye- umnyango wekhabethe Iirack ziyakwazi ukubamba izihlangu ezininzi, kodwa qiniseka nje ukuba izixhobo zomnyango wakho kunye nezinto zomelele!
Le ngasemva komnyango wezihlangu emnyango ixhonywe kuloliwe ongaphezulu emnyango kwaye ibaleke ukuphakama komnyango, ikuvumela ukuba usebenzise indawo yokugcina izihlangu. Ukuba ungathanda ukusebenzisa into efanayo, jonga ukususwa kwakho kwaye uqiniseke ukuba ayibethi nantoni na okanye naluphi na udonga.
Amanqanaba amathathu esihlangu - Jonga kwi IAmazon
umtshato ikhadi lemifanekiso template
Unokubeka ezi shelufu zezihlangu ezizimeleyo nakweyiphi na iikhabhathi ezikhoyo ukuze usebenzise kwangoko indawo esezantsi yekhabhinethi yakho
Uyilo lwe-rack olujikelezayo lulungile ukuba uphume esithubeni kodwa ufuna kakhulu indawo yokugcina izihlangu. Ezi zihlangu zijikelezisayo zezihlangu zihlala zenziwe ngaphakathi kwaye ziyakwazi ukusebenzisa iikona ezifileyo zeekhabhathi. Ukuba awunalo uhlahlo-lwabiwo mali okanye indawo eyakhelwe-ngaphakathi ejikelezayo yezihlangu ikhabethe, kukwakhona ezimeleyo ezijikelezayo izihlangu ezixhonyiweyo ezenza umsebenzi ofanayo, nangona zigcina isixa esincinci sezihlangu.
Le khabhathi yezihlangu ejikelezayo eyakhelwe-ngaphakathi ibekwe kwikona yolawulo, ikuvumela ukuba wandise indawo yekona efileyo.
Ukujikeleza izihlangu - Bona kwi IAmazon
Esi sihlangu sentsimbi sijikelezayo sikuvumela ukuba ugcine izihlangu ezimbalwa kodwa uhlala kwisithuba esincinci kuphela. Qaphela nangona kunjalo, ukuba olu hlobo lwe-shoe rack alukwazi ukugcina zonke iintlobo zezihlangu ngokungafani neeshelfu.
Kwiindawo zokuvalwa ezincinci, unemida ngokwenene xa kufikwa kukhetho lokugcina, kwaye kuxhomekeke kubeko lwakho lwangoku, ezimbalwa kwezi zinokusebenzela wena:
Iinqwelo zeCube zeCube eziPhathekayo -Ezi zinto zirhangqileyo ziza ngeendlela ezahlukeneyo kwaye zinokusetyenziselwa ukubonisa nantoni na oyifunayo.
Ityhubhu yezihlangu-Jonga kwi IAmazon
Le tyhubhu ityhubhu ineplastikhi yoyilo enqabileyo enomtsalane ngokwaneleyo ukuba ibekwe kwigumbi lakho lokulala okanye iya kujongeka ilungile ekhabhathini.
Iiphaneli zeGridi zentsimbi -Ungazincamathisela okanye uzixhome eludongeni okanye egumbini lakho. Ezi panels zesinyithi zingasetyenziselwa ukuxhoma izihlangu ngezithende.
Iintambo zentsimbi - Sebenzisa iintonga zentsimbi ukwenza ishelufu yezihlangu encinci emazantsi engingqi yakho okanye uthenge ikhithi ebiza imali encinci esele yenziwe.
Ityhubhu encinci yentsimbi yokugcina isihlangu - Jonga kwi IAmazon
Emva kweShelf yezihlangu zoMnyango -Ukuba umnyango wakho unemvume eyoneleyo emva kwawo, oku kunokusebenza kakuhle.
Emva kwendawo yokugcina izihlangu emnyango- Jonga e IAmazon
Isixhobo sezihlangu -Ungathenga indawo yokugcina iiplastiki ezigcina indawo ukubeka ezantsi kwiikhabhathi zakho. Oku kuyakuvumela ukuba ugcine isithuba kwaye ugcine izihlangu ezimbalwa. Ungazisebenzisa ezi shelufu sele zikhona ukugcina indawo engaphezulu.
Isitaki seplastiki seplastikhi- Jonga kwi IAmazon
Ndwendwela eli phepha ukubona okungakumbi Ukuhamba-ngaphakathi kweekhabethe izimvo kunye noyilo.
Udonga lwe-navy oluhlaza
Iipokotho ezingama-24- I-SimpleHouseware… $ 9.47 umthengisi ogqibelele (64185) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Umboniso wezihlangu zensimbi zangoku zeMDesign ... $ 29.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-396 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-MISSLO ngaphaya koMcwangcisi weziXhobo zoMnyango 24… $ 13.99 ngexabiso umthengisi ogqibelele (Ngo-19316) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Whitmor ngaphezulu kweeshelfu zezihlangu zomnyango $ 18.99$ 34.99 umthengisi ogqibelele (3287) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-ClosetMaid 1233 Adjustable 8-Tier Wall… $ 33.99$ 64.28 umthengisi ogqibelele (22714) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Umama ohlekisayo unyana dances zomtshato
I-MAX Houser Ilaphu lelaphu lokuGcina imigqomo, esongekayo… $ 18.88 umthengisi ogqibelele (1420) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
IPulatree Grid Photo Wall (Ultra Enkulu),… I $ 32.98 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-327 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Umququzeleli wezihlangu - Isakhelo sezihlangu seChrome… $ 69.99 umthengisi ogqibelele (818) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Iingoma zomdaniso womama wonyana zika-2020
uzithumela nini izimemo zomtshato
Umhla wokuzalwa komamazala
Zonke iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezibandakanya wonke umntu wasenyangeni